Chinzwa kudya kwandakazoita beche ex wangu auya kusleepover – Vanoda Zvinhu
So I had re established contact na ex wangu. Ndandambopengesana naye musikana uyu but takazorambana mushure mekuge andiudza kuti akaloser vejaz when we lost contact after high school, apa madiro andaimuita ndaida kutomuroora so zvakazongonetsa tikasiyana coz i felt betrayed and she said she understood my disappointment. Iye anotyora kuKadoma ini zvangu muHarare but we had met in high school.
Anyways, ndiri mufinal year yangu ndo patakazotanga kusasa pa app, ndobva babe rangotanga kungochema chema he ndine mface anochengera he anozodii dii, ini ndichingoprovider shoulder to cry on, ukuzve ndichikanda tumasweet nothing.
My birthday was coming up muna November, so tichingovhara semester iyoyo ndakabva ndanzi nebabe I want to do something special for u zvandisina kumbokuitira when we were dating, ndikati chii dhiya wangu zvikanzi ah, uchangoona pandouya kuHarare ikoko. So ndakabva ndamuti chero neniwo dakukuita something, zvikanzi chii, ndikati wakambodyiwa beche here, zvikanzi handina, ndikati right, uuye wakashaver pauchauya kuHarare zvikanzi bhoo….
Ha saka ini ndaitogaya kuti masketch, ndodozonzwa munhu akunditi after some days, sha ndirikuuya mangwana hanty your birthday ndimangwana, ndikati ehe,…ah tsano, i freaked out coz apa i was renting some dilapidated room kuseri kwacho kwaitochengetwa huku. So ndakabva ndabuda pachena ndikati ha babe pandogara panomakisa shaaz, so hazvite uuye zvikanzi if you can manage to live there chero ini i can also manage, hey but mamwe mababe so they are understanding, iyezvino ndane svimari ndakutowisher kuti hangu dai ndikawana babe riri humble risiri gold digger like Vee wangu.
So babe rakazondiconvincer kuti haina pressure kuti risvike paden, so I said ayt, then mangwana fone yapinda kuma 6pm, babe ndapinda tonaz huya unditore!!!! Shamwari hana yangu yakarohwa nehana, ndajambira kombi paya, ndasvika ndatora babe pachicken slice iri muna Mbuya Nehanda iya.
Pandandiri kuattachemnt ndanga ndaisawo tumasavings paside so ndakanowithdrawer ka30 mari, ndobva tadzoka pachicken slice paya apa tirikungoti tikatarisana toita kunge tichatsemuka nekupanana masmile. I really loved that girl apa we had last seen each other muna 2008, only kuzosangana 2012 imagine, some good four years baba, like coz patakambodzokerana zvaingova zve pa app, takasvika kuramba tisina kuonana, lol, crazzy i know.
So takatenga manice edu paya ndobva tasvika paden tikapunzumura, zvikanzi babe show me the bath dakugeza, baba akabva ageza. apedza kwakuuya zvake ndobva tatyora muden. Skiri yanga ichiri yakalacker so i said the first thing that came into my mind ndikati babe, are you ready kuti ndikuite zvandakakupromiser zvikanzi ehe.
Hede, ndandisati ndambobvisa musikana hembe(kana uchikecha hakuna madhiri akadaro, ndokwandandabvira hujaya), so ndakatanura nhumbi paya mudhara, kunobvisa brugwa kudai,wanike akashaver baba. ndobva ndati I want you to relax babe, nyatsorara zvako ndishande basa.
So ndandisati ndambodya beche but I had seen enough pamapono so ndakabva ndangoti muromo ndure pagambi mudhara,ndokutanga kurinanzva sechimbwanana, just like i had seen on many times palaptop yangu. Ngaashinyire mwana, ini ndichingonanzva, so ndakabva ndazochinja skiri ndikatanga kumusvira nerurimi, kasmeroo kegeisha kakamboda kundikataza but ndakarovera moyo kudombo, ha ndakaridya beche babe richimonyoroka richishinyira ini ndichishanda chete.
Ndaneta nekudya beche paya ndikati ko inonzi six nine unoiziva here babie, zvikanzi ndoipi ndikati I am gonna lie on my back, then you come on top of me, woenda all fours wakaisa mhata dzako kuface kwangu wodya dik yangu ini ndokondinya nekudya beche, akagona kuteera mainstructions ndobva takondinya nebasa and ndakanakirwa zvokuti ndaipota ndichipauser kusuker gambi rake ndichiteerera kudyiwa mboro, of coz now I have had better bl0wjj0bs so kunyange zvake anga asiri kunyatsogona, that was my first real blow j0b and gotsi rakaoma kuti papata. When I felt kuti ndabhoo, ndakazomuti right, chirega ndisvire baby….so ndakanoiti pfee iri nyoro ndobva asvetuka zvikanzi wear a condom baby, ndikati why, dont u trust me, zvikanzi aiwa, i trust you but kubva zvandakakwira neumwe mface i wasnt tested so handidi kukukuvadzisa just in case ndine zvandakasangana nazvo, so i complied ndobva ndaiputira….ndokudzoka pandima, ha to be honest experience was little then but I employed ma tactics andanga ndaverenga panet, kufunga zvinobhowa kurova missionary and focusing on pleasing her, so i pulled a surprising 20 mins or so ndiri pamsoro.
Ndakazotunda ndikati watunda here babe, zvikanzi numerous times u didnt notice ndikati ha, kana, ndakatsva. So after resting, takazonyatsotanga foreplay, takukissana, ehe, ko zvekumbodyana zvebasa rei, so yamira futi ndakati chindipa neshure, ahh amana doggie style maone, ndakangoti cho cho cho, 2 mins ndandatotunda ndanakirwa nemazigaro ake.
So takazorara zvedu catching up, then 12 midnight, she kissed me deeply and said, Happy birthday darling, i am glad I have finally made it up to you. So ndakazomutswa kuma5 zvikanzi chindiperekedza kubus stop ndoda kumhanya kuChitungwiza kwamainini, hameno visa racho ranga ragadzirwa chirudzii, so ndakamuperekedza tamuroad ndikati babe unoziya manakiro awanga uchiita dai wandipawo morning glory zvikanzi, ah, ko wadii kutaura, ndikati ha dont worry u r mine, hapana chekutya, oh boy, had i known kuti ndolast time yangu kumusvira mwana iyeyo coz takazoitana rough iya yekungoignowana then zvikafa. Now she hates me hanzi unoda kugondishandisa.
Manje this days i check her out pawhatsapp haachadi kupindura mamessage angu apa mazigaro aava nawo, ha ndaidriver chete kuenda kunomusvira kadoma but eish, haachada zvvekutaura neni, so I have had to acccept and move on.
So thats my story people, hope you found it interesting
Next story Go bhora kumubvisa humhandara Amina!
Previous story Ndakazovasvira mai TINO